Warqad-sanadeed - goynta leysarka iyo daloolinta saxannada saxarada la xoqin karo - Laser Dahab ah
Warqad-sanadeed - goynta leysarka iyo daloolinta saxannada saxarada xoqan
Laserku waa xal kale oo loogu talagalay ka shaqeynta warqada ciida si loo fuliyo baahiyaha cusub ee loo qabo soo saarista iyo soo saarida saxarada saxarada la xoqo, kuwaas oo ka baxsan helitaanka goynta dhaqameed.
Si loo hagaajiyo heerka soo-saarista boodhka oo loo dheereeyo nolosha maqaarka saxanka, godad badan oo tayo-wanaagsan oo ka sii-soo-saaridda boodhka ah ayaa loo baahan yahay in lagu soo saaro dusha sare ee maqaarka xoqan. Ikhtiyaar macquul ah oo lagu soo saari karo godad yaryar oo ku yaal warqadda ciida waa in la isticmaalowarshadaha CO2 nidaamka goynta laser.
Helitaanka Laser Processing
Ka baaraandegidda waxaa laga heli karaa Warqadda Sanduuqa ah (Maaddooyinka Nalalka) ee leh Nidaamyada Laser CO2 ee Goldenlaser
Daloolka Laser Micro
Faa'iidooyinka goynta leysarka ee warqadda ciida:
Falanqaynta laser-ka ayaa baabi'ineysa baahida loo qabo qalab adag.
Nidaamka laysarka ee aan lala xiriirinaynin ma keenayo isbeddel ku yimaada dusha sare ee xoqan.
Meelaha jilicsan ee goynta leysarka jarjarka ah ee laysarka jarjaray.
Daloolin iyo goyn hal hawl ah oo leh ugu badnaan sax iyo xawaare.
Ma jiro xirmo qalab - tayo goyn joogto ah oo sare.
Laydhadh awood badan leh oo CO2 ah oo lagu dhex daray nidaamyo ballaaran oo galvanometer ah ayaa bixiya barxad ku habboon oo lagu farsameeyo saxannada ciida. Waa wax caadi ah in la helo ilo badan oo leysar ah si loo kordhiyo wax soo saarka.
Goldenlaser waxay soosaaraysaa nidaamka goynta leysarka ZJ (3D) 15050LD CO2 Galvo gaar ah oo loogu talagalay warqadda ciida
Madax badan oo leysarka Galvo ah ayaa isla duullimaadka ku wada duulaya.
Awood u leh howsha warqada ciida ee ka soo baxda duudduubka dhaqdhaqaaqa ee socda.
Waqtiyada ugu yar - Isbedelka degdega ah ee qaababka goynta.
Hawlgalka oo dhan waa otomatig la'aan faragelinta gacanta.
Fududeeye otomaatig ah, dabayl dabaysha iyo ikhtiyaariyada isdabajoogga ah ee robotka ah si aad ula kulanto baahiyahaaga wax soo saarka xoqan.